လေယာဉ်ချဉ်းကပ်ပြေးလမ်း - ဝီကီပီးဒီးယား
ချဉ်းကပ်လေယာဉ်ပြေးလမ်းမှာ လေယာဉ်ပျံများ လေယာဉ်ပြေးလမ်းပေါ်သို့ သွားလာရန် သတ်မှတ်ထားသည့် လမ်းကြောင်းဖြစ်သည်။ များသောအားဖြင့် မာသော ကတ္တရာ (သို့) ကွန်ကရိလမ်းများ ဖြစ်သော်လည်း လေဆိပ်အသေးများတွင် မြေသားကို အသုံးပြုခြင်းလည်း ရှိသည်။
အလုပ်များသောလေဆိပ်များတွင် ထိုလမ်းကို အလွယ်တကူ လျင်မြန်စွာထွက်နိုင်ရန် ပြုလုပ်ထားသည်။
ထိုနေရာကို အသုံးပြုရန်အတွက် များသောအားဖြင့် အမြန်နှုန်းကန့်သတ်ချက်မရှိပေ။ စံအနေဖြင့်ထားသောအရှိန်နှုန်းမှာ ၃၇-၅၆ ကီလို/နာရီ ဖြစ်သည်။
Normal Centerline A single continuous yellow line, ၁၅ စင်တီမီတာ (၆ လက်မ) to ၃၀ စင်တီမီတာ (၁၂ လက်မ) in width.
Continuous markings consist ofacontinuous double yellow line, with each line being at least ၁၅ စင်တီမီတာ (၆ လက်မ) in width, spaced ၁၅ စင်တီမီတာ (၆ လက်မ) apart. They divide the taxiway edge from the shoulder or some other abutting paved surface not intended for use by aircraft.
Dashed markings define the edge ofataxiway onapaved surface where the adjoining pavement to the taxiway edge is intended for use by aircraft, e.g. an apron. These markings consist ofabroken double yellow line, with each line being at least ၁၅ စင်တီမီတာ (၆ လက်မ) in width, spaced ၁၅ စင်တီမီတာ (၆ လက်မ) apart (edge to edge). These lines are 15 feet (4.6 m) in length with 25 foot (7.6 m) gaps.
↑ FAA Advisory Circular No: 150/5340-1J March 31, 2008 – Standards for Airport Markings။ January 1, 2018 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ (canceled and replaced by150/5340-1K)
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=လေယာဉ်ချဉ်းကပ်ပြေးလမ်း&oldid=398072" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၂၅ ဧပြီ ၂၀၁၈၊ ၁၃:၅၇ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။